Ukukhuselwa kweeasethi ezingaselunxwemeni kunye nokuBucala kwezeMali-Uyenza njani kwaye phi
I-Offshore Inkampani.com incede ukukhusela izigidi zeedola kumawakawaka abathengi kunye nokukhuselwa kwempahla ye-ironclad. Sinokukunceda nawe.
Izizathu zokuKhusela iiasethi zakho
Ishishini / iQabane ityala
Ababolekisi ngokungekho sikweni / ngokungekho mthethweni
Khusela ikhaya lakho, ukonga kunye notyalo mali
Sinikezela ngenani leenkonzo zokukhusela iiasethi ezisuka kwinto elula nekhuselekileyo ukuya kobunzima kunye nokuthintela iimbumbulu. Uthethathethwano ngalunye SIMAHLA luya kukhokelela ekubeni ufumane isisombululo sesiko esilungele iiasethi zakho kunye nomngcipheko wakho. Akukho nto incinci kakhulu ukuba ungayikhusela.
Iindlela ezi-3 eziphezulu zokuKhusela iiasethi
Yenza iTrasti ye-Offshore
Cwangcisa iakhawunti yebhanki yamanye amazwe nge-100% yabucala
Qala iqumrhu elingaselunxwemeni okanye inkampani encinci yetyala ukukhusela ubuninzi
Siyathembisa ukusebenza nawe kwaye sifumane esona sisombululo sisiso ukukhusela iiasethi zakho ekubanjweni okungafunekiyo. Tsalela umnxeba okanye ugcwalise ifom yoqhakamshelwano kweli phepha.
UkuQalwa kweNkampani ye-Offshore kunye noKhuseleko lweeaseti
Ukubeka iiasethi kwiinkampani ezingaselunxwemeni kunye nolwakhiwo lomthetho kunokubonelela ngokhuseleko oluqinileyo kumatyala exesha elizayo. Abanye babantu abazizityebi nabakhuselweyo ngokusemthethweni emhlabeni baya kuthi enye into "Awunanto, lawula yonke into." Ngokuba neeakhawunti zebhanki kunye nezinye iiasethi zezakho iziko zenza ukuba kube nzima ukuzifumana ngophando lweeasethi zobungcali.
Ukudityaniswa kweNkampani ye-Offshore kunye noKhuseleko lwezoMthetho
Ukuba umchasi osemthethweni ulandela ityala, oku kubandakanya ukukhangela iiasethi ukuqinisekisa ukuba kuya kubakho imbuyekezo xa kunikezelwa isigwebo. Ukuba nee-asethi egameni lomntu kunokufunyanwa ngokukhawuleza kukhangelo olulula. Ukwenza iinkampani ezingaselunxwemeni kunye nokubiza iiasethi kwinkampani, kuthetha ukuba azisabophelelwanga kwigama lakho. Ke ngoko iiasethi zakho zinokukhuseleka kubachasi bezomthetho, iijaji kunye nezigwebo zenkundla ngokubandakanya unxweme.
Olunye uncedo onokulusebenzisa ngokulula. Uninzi lwamagunya aselunxwemeni enza ukuba kube lula kuye nakubani na onomdla wokubandakanya. I-Offshore Inkampani.com yinkokeli yehlabathi kulwakhiwo lwamashishini aselunxwemeni. Siyanceda kwisicwangciso sakho kunye nokuphuhlisa isicwangciso sokukhusela iiasethi kwiimfuno zakho.
Igqityelwe ukuvuselelwa nge-4 ka-Agasti ka-2018